दसैं-तिहार विशेष गीत ‘फर्की आउ पर्देशी’ सार्वजनिक – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, ११ आश्विन शनिबार १६:००
एजेन्सी, पाल्पा । पाल्पाका युवा गायक कमल भट्टराईले नयाँ दशै–तिहार गीत बजारमा ल्याएका छन् । धिताल फिल्मसमार्फत गायक भट्टराईले ‘फर्की आउ पर्देशी’ गीतको भिडियो दर्शक/श्रोतामाझ ल्याएका हुन् । गीतलाई कमल भट्टराई र पद्मा बस्याल (रीता पाण्डे)ले स्वरबद्ध गरेका हुन् । गायक भट्टराईको आफ्नै शब्दमा यो गीतलाई प्रेम लामिछाने मगरले संगीतबद्ध गरेका छन् ।
भिडियोलाई गायक भट्टराई आफैले निर्देशन गरेका छन् । गीतको कथामा एउटा गरीब नेपाली ऋण काडेर कसरी विदेशिनु पर्छ ? विदेश पुगिसकेपछि के-कस्तो पीडाहरु भोग्नुपर्छ ? त्यस्तै दसैं–तिहार लगाएतका विशेष चाडवाडका बेला घर फर्किन नपाउँदाको पीडासँगै घरमा कमाउने मान्छे नहुँदाका छिमेकीहरुले गर्ने व्यवहारलाई भिडियोमातर्फ मार्मिक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ ।
गीतको भिडियोमा गायक भट्टराई र गायिका बस्याल आफै फिचर्ड छन् । गीतको सार अनुसारनै सन्देश मुलक र मार्मिक भिडियो पनि बनेको हुनाले सबै दर्शक/श्रोताहरुको मन जित्नुका साथै गीतले चर्चा पाउने विश्वास रहेको गायक भट्टराईको दाबी छ । गीतको भिडियोलाई सुमन कार्कीले छायाङ्कन गरेका हुन् ।
– सुमन कार्की
PREVIOUS Previous post: जनता, उद्योगी, व्यापारी सरकारसँग आजित भइसके : काँग्रेस
NEXT Next post: फिल्म ‘पोइ पर्यो काले’को पोस्टर सार्वजनिक